သင်က Umeda အတွက်လုပ်ဖို့ရှိသည်အမှုအရာ | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › သင်က Umeda အတွက်လုပ်ဖို့ရှိသည်အမှုအရာ
သင်က Umeda အတွက်လုပ်ဖို့ရှိသည်အမှုအရာ
Umeda Kita ခရိုင်, မြို့အလယ်ဗဟိုတက်စေအများအပြားစျေးဝယ်အဆောက်အဦးရှိပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးအချို့သည် Hankyu ဦးစီးဌာန Store နဲ့ Daimaru ဦးစီးဌာန Store ကိုဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်များနှင့်သေးငယ်ဆိုင်များနှင့်အတူ High-end အမှတ်တံဆိပ်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤအဌာနကစတိုးဆိုင်ထဲကအတော်များများဒီတော့နာရီကြာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစျေးဝယ်, မြေအောက်အဆင့်ဆင့်အပါအဝင်မျိုးစုံပုံပြင်များ, ရှိသည်။ ကစာသား inUmeda ဦးစီးဌာနစင်တာများဖွစျနိုငျသကဲ့သို့သင်တို့ drop မရောက်မှီတိုင်အောင်, ဆိုင်, ပဲစကားပုံမဟုတ်ပါ!
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လက္ခဏာနှင့်ပစ္စည်းများကိုအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့သူတို့အားကွဲပြားခြားနားကြသည်အဖြစ်ပြီးသားခရီးသွားဧည့်များအတွက်အသစ်အဆန်းတစ်ခုသဘောမျိုးကိုင်ဝတ္တုစာအုပ်ဆိုင်ဂျပန်စျေးဆိုင်တစ်ခုမျက်စိထဲကကိုထားပါ။ဤနေရာတွင်စာရင်းဒေသများမှာတွေ့ရှိတချို့ကစျေးဆိုင်တစ်ဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီး, ဤအနည်းငယ်သာကျောက်မျက်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ Kiddy မြေအိုဆာကာဂျပန်အကြီးဆုံးကစားစရာစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျဓာတျပုံနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုယူနိုင်သောနေရာတဝိုက်လမ်းလျှောက် mascots, အဖြစ်အပျက်နေရာများရှိပါသည်ကြောင့်ကျိန်းသေအရှိဆုံးပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ Pokemon လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်အိုဆာကာရထားဘူတာရုံမှာ Pokemon Center ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးပန်ကာမဟုတ်တောင်မှလျှင်, display တွေကြည့်ရှုဖို့လာမယ့်နှလုံးမှာငယ်ရွယ်သူတို့အဘို့တစ်အားရစရာရှိနိုင်ပါသည်။ စူပါကလေးတွေကမြေ Honten Joshin ပရိတ်သတ်တွေနေသောသူတို့အဘို့ကြီးတစ်ခု anime နှင့် manga ကိုစတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Covo ထိုကဲ့သို့သောစာရေးကိရိယာများ, စားပွဲဝိုင်း, အဆင်တန်ဆာများနှင့်အခြားချစ်စရာ knick-knacks အဖြစ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြင်သစ်ပေါ့ပ်ယေဘုယျကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပါတယ်။
3. ရန်းတပ်ဦးအိုဆာကာ Explore
စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းသွားကြဖို့နောက်ထပ်နေရာက Grand တပ်ဦးအိုဆာကာအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းလူနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေနဲ့ဟိုတယ်ရရှိထားသူမသာ။ အဆောက်အဦးအတွင်း၌တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ရပ်နားသည့် Panasonic က Center ကဖြစ်သကဲ့သို့ဤတည်နေရာကိုဤစာရင်းတွင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အီလက်ထရောနစ်အမှတ်တံဆိပ်သင်မြင်ခြင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အဘို့အနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အတူထွက်တကွသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကားအရောင်းပြခန်း, ရှိပါတယ်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံကိုဂျပန်တွင်ဖန်ဆင်းရှိတဲ့ + STYLE ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး၏တောင်ဘက်တောင်ပံမှာတည်ရှိပါတယ်, သင်ရောင်စုံပစ္စည်းများ, strips တွေနှင့်ခါးပတ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူရင်းအိတ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာကိုအနည်းငယ်စျေးကြီးအရွယ်အစားပေါ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာအခြားသင်သည်ထုံးစံသင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လက်ကိုင်အိတ်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ် ?!
Whity Umedaမှာ 5.
ဒါပေမယ့်အားလုံးမြေအောက်ဖြစ်ပါသည် – ကဒီကုန်တိုက်ဟာ Umeda ခရိုင်၌တည်ရှိ၏နှင့်တရာနှစ်ခုကျော်စျေးဆိုင်ရရှိထားသူ 1987 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်Whity Umedaဆိုင်နည်းလမ်းက’ပြန်လည်မွေးဖွားအဖြူမြို့’ ‘ဘာသာပြန်ထားသော! ဒီနေရာတွင်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်များ, အလှကုန်, ဖိနပ်, ရတနာနှင့်ပိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အလယ်ဗဟိုတွင်တစ်ဦးကစမ်းရေတွင်း၌သင်တစ်ဦးအနီးအနားမှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြအမှု၌အဆင်းလှသောဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချွတ်ပေးသည်။
Hankyu Entertainment ကပန်းခြံမှာကူးတို့ဘီး 6.Ride
တစ်ခုအပန်းဖြေပန်းခြံတစ်ဦးစျေးဝယ်ကုန်တိုက်အတွင်းမှခဲ့လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါပု။ ဒါကသင်တို့အဘို့ Hankyu Entertainment ကပန်းခြံပါပဲ။ သငျသညျထိုအဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်တွင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်အိုဆာကာစီးတီး၏ 360 ဒီဂရီအမြင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာ Hep ငါးခုရဟတ်ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုသင်စျေးဆိုင်များနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦတစ်ခုအကွာအဝေးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အတော်များများကအငယ်လူကြီးများ, စားသောက်ဆိုင်နှင့် Sega ဂိမ်း ROOM တွင်များအတွက်ခေတ်မှီစျေးဆိုင်ပျော်မွေ့။ သင်တို့သည်လည်းမျက်နှာကျက်ကနေဆွဲထားကြီးမားတဲ့အနီရောင်ဝေလငါးများပါဝင်သည်သောအဆောက်အဦးအတွင်းမှများစွာသောထညျ့ဇာတ်ကောင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအဖွင့်အနေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစက်အပြောက်ပါသလဲ တကယ့်တစ်ဦးစျေးဝယ်ကုန်တိုက်လား? အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ရှာတွေ့ပြန်ပြောဘာသင်ဒီမှာလာရောက်လည်ပတ်ပျော်စရာရှိသည်မယ်!
ဤသည်ဗိမာနျတျောကအိုဆာကာ၏လူတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့လှပသောသည်ဗိမာနျတျောမှာရုပ်ပုံများကိုယူပါ။Shitennoji ဘုရားကျောင်းကိုဂျပန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကြီးနှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးက၎င်း၏ positioning ကိုထံမှအများအပြားဘာသာရေးရှုထောင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ, အလွှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာများအလေးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ Kings enshrining ၏ရည်ရွယ်ချက်။ ဤ site ဟာအလုပ်များအိုဆာကာမြို့နှင့်ဂျပန်ရှေးဟောင်းဗိသုကာဦးပထမဦးဆုံးလက်ကိုတွေ့မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အပန်းဖြေဖို့နေရာအဖြစ် (ကညဥ့်အချိန်တွင်တက် lit ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ) က၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုအလားအလာအဘို့ဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အဲဒီမှာ Umeda Sky အဆောက်အအုံတစ်ခုခရီးစဉ်စေရန်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဆောက်အအုံတွင်ကြည့်ပါ။ပထမဦးဆုံးအကြောင်းရင်းဆှဲဥယျာဉ်, ‘ဗာဗုလုန်ဆှဲဥယျာဉ်’ ‘တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ယူကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အလင်းအိမ်နှင့်အခြားတောက်ပအလှဆင်မျှော်စင်ကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်လျက်ပေါ်လာအောင်, ပတ်လည်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအရပ်မှ, သငျသညျ 360 ဒီဂရီဘုန်းအတွက်မြို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီတစျခုလုံးကိုအဆောက်အဦဖန်ထဲကလုပ်လျှင်ကြောင့်ပေါ်လာသောအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သငျသညျ, ခေတ်သစ်ဗိသုကာစတိုင်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများပါဝင်သည်သော Umeda Sky အဆောက်အအုံအတွင်းရှိစျေးဆိုင်များ, စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာချစ်ရသူတစ်ဦးဆောင်ခဲ့နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ဤအဆောက်အဦး၏ထိပ်မှာစွန့်ခွာဖို့နှလုံး shaped သော့ခလောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏မေတ္တာသည်အစဉ်အမြဲဒီအချစ်ခရီးလမ်းဆုံးမှာပြဌာန်းဒီသော့ခတ်အဖြစ်လေ့လာမှု, ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
9. Hankyu Umeda
ဒီအတော်လေးမကြာခဏပြခန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုအဖြစ်ဤစာရင်းတွင်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်သည်ပြခန်းထွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။မည်သည့်နှုန်းသည် Hankyu Department Store ၏နဝမကြမ်းပြင်ပေါ် Hankyu Umeda ပြခန်းတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးအထင်ကြီးလိမ့်မယ်။ ယခင်ပြပွဲကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းကယ်လီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗီရိုထဲကနေပစ္စည်းတစ်ခု Nordic ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်အရသာနှင့်နမူနာပါဝင်သည်ကြောင်းချစ်သူများနေ့ချောကလက်ကုန်စည်ပြပွဲများပါဝင်သည်။ မတ်လ 2017 အတွင်းမှာလက်ရှိပြပွဲ ‘: အဆိုပါချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့သျှင် Bohemian Glass ကိုစတူဒီယိုတခု’ ‘ဖြစ်ပါတယ်။ Glass ကိုထွင်းထုဆန္ဒပြပွဲများ display ကိုအဖြစ်စုဆောင်းမှုထဲမှအပိုင်းပိုင်းအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြည့်ရှိသည်နှင့်သင်တစ်ခုခုအံ့ဖှယျတှေ့ရှိစေခြင်းငှါ,!
10 Tsuyunoten Pay
ဘုန်းကြီးကျောင်းနတ်ကွန်းမှာအသင့်လေးစားမှုဂျပန်နည်းနည်းဘက်လမ်းများ၌တွေ့ရှိရပေမယ့်ဒီတစ်ခုယုံကြည်သူများနှစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံများမှပဌနာလက်ခံနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုမချခင်ကောင်းသောကံကြမ္မာလိုသူဒေသခံစီးပွားရေးသမားများဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ Sonezaki Shinju ၏ဂုဏ်အသရေရှိသူတို့၏အရိုအသေပေးချေတဲ့သူလူငယ်များကိုသူတို့ရဲ့ချစ်သူများဖြစ်ကြသည်။ Sonezaki Shinju အဆိုပါချစ်သူများအတူတကွဒါသတ်သေမရနိုင်တော့ဘယ်မှာ Romeo နဲ့ Juliet ဆင်တူတဲ့ပြဇာတ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပါမယ် 1703 ၌ဤနတ်ကွန်းမှာအဖြစ်ပျက်များနှင့်တစ်ဦးဂျပန်ပြဇာတ်ရေးဆရာသည်သူ၏ကစား, အ Sonezaki Shinju မှာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကပြောကြားခဲ့သည်။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုအတွက်သို့မဟုတ်သင့်လက်ရှိဆကျဆံရေးအောင်မြင်မှုချင်တယ်ဆိုရင်သွားလည်လာကြ။
အိုဆာကာအတွက်လုပ်ဖို့ 10 အရာ, အိုဆာကာလာရောက်လည်ပတ်နေချိန်မှာသင်မပျက်မကွက်မပေးနိုင် 10 မျက်မှောက်နှင့်သင့်စုံလင်သောခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့ Shinsaibashi အတွက်လုပ်ဖို့ရှိသည်အရာနှင့်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားစာရင်းထွက်များစစ်ဆေး!
MaikoyaUmedaPokemonအိုဆာကာMaiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်ဂရန်းတပ်ဦးအိုဆာကာHep ငါးခုရဟတ်အိုဆာကာဘူတာစီးတီးUmeda Sky အဆောက်အအုံ